Vaovao Mafana · Septambra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Septambra, 2011
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Septambra, 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 30 Septambra 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 26 Septambra 2011
Zambia: Lasa Alohan'ny Fampahalalam-baovao Mahazatra ny Mpiserasera Amin'ny Famoahana Vaovao Momba Ny Fifidianana
Afrika Mainty 26 Septambra 2011
Nifidy filoham-pirenena, mpikambana ao amin'ny antenimiera ary solotenan'ny governemantam-paritra ny Zambiana tamin'ny 20 Septambra 2011 lasa teo, fantatra fa nanomboka tamin'ny 6 ora maraina ny fandatsaham-bato, maresaka tanteraka ny Twitter, Facebook sy ny tranokala mpanaramaso ny fifidianana Bantu Watch tamin'ny fanehoana izay tsy fetezana rehetra nanamarika ny fiandohan'ny fandatsahambato . Tao...
Zambia: Nanome Valim-pifidianana ny Mpiserasera Noho ny Fahatarana Amin'ny Famoahana Izany..
Afrika Mainty 24 Septambra 2011
Valo ambinifolo ora taorian'ny fikatonanan'ny fifidianana tao Zambia ny 20 Septambra lasa teo, nahatonga ny loharanm-baovaon'ny valan-tserasera hamoaka vaovao farany mikasika ny vokam-pifidianana filoham-pirenena, antenimiera ary ny governemanta ao an-toerana ny fahatarana ela be avy amin'ny Vaomiera Misahana ny Fifidianana (ECZ) amin'ny famoahana ny voka-pifidianana. Mpahay toekarena Zambiana mamoaka hatrany ny vaovao...
Yemen: Vonomoka Nandeha Mivantana Tamin'ny Aterineto
Vonomoka iray no nojerena maso mivantana , isak'izay bitsika nalefa, tao Sanaa renivohitr'i Yemen. Ny tafika mitam-piadiana Yemenita dia nitifitra ireo mpanao hesi-panoherana, nahafaty olona 22 raha kely indrindra ary naharatràna an-jatony maro hatreto. Mandeha mivantana amin'ny alalan'ny live feed ilay zava-mahatsiravina, ary hitan''ireo mpijery an'aliny maro izay tohina nanerana ny tany
India : Fipoahana Baomba Teo Ivelan'ny Fitsarana Avon'i Delhi, Nahafaty Olona Sivy
Azia Atsimo 13 Septambra 2011
Farafahakeliny olona sivy no voalaza fa namoy ny ainy ary dimy amby efapolo no naratra tamin'ny fipoahan'ilay baomba teo ivelan'ny Fitsarana Avon'i Delhi aloha be io maraina io. Naneho hevitra tamim-pahatohinana sy tamin-katezerana tao amin'ny Twitter ireo mponin'ny aterineto. Fanadihadiana Aparna Ray
Ejipta: Nandrava Tamboho sy Nanaisotra ny Sainan'ny Ambasady Isiraeliana ny Mpanao Fihetsiketsehana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 10 Septambra 2011
Eo an-kianjan'i Tahrir, ivom-besatry ny revolisiona Ejipsiana ao afovoan-tanànan'i Kairo, androany [zoma] ny mpanao fihetsiketsehana an'arivony ho fanoherana ny fitondrana miaramila ao Ejipta. Vetivety monja dia tanoralahy maro no nihaodihaody tany amin'ny Ambasady Isiraeliana izay nandravan-dry zareo ny tamboho fiarovana ny Ambasady, sy nanesoran-dry zareo ny saina Isiraeliana rehefa nanatona ny alina. Indro ny sombotsombin'ny zavanisy voatatitra ao amin'ny Twitter
Angola: Lahatsarin'ny Famoretana Ny Fihetsiketsehan'ny Tanora Tao Luanda
Ny Asabotsy 3 Septambra 2011 dia nisy tanora teo ho eo amin'ny 200 teo no nivory tany Luanda, Angola ho fanoherana ny tsy fahampian'ny fahafahana sy ny fitondran'ny Filoha José Eduardo dos Santos nandritra ny 32 taona. Araka ny nolazain'ny vavolombelona dia niafara tamin'ny fikapohan'ny polisy ny mpanao fihetsiketsehana izany fanoherana izany.
Madagasikara: Asehon'ny telegrama Wikileaks ny tsi-fitoviam-pijery diplomatika taorian'ny fanonganam-panjakana
Afrika Mainty 03 Septambra 2011
Sam Ganegie manadihady ny telegrama ampolony vao navoakan'ny wikileaks miresaka momba an'i Madagasikara. Nomarihany tamin'izany ary fa heverin'ny mpanelanelana momba ny krizin'i Madagasikara Atoa Chissano fa ny fanohanana mandeha irerin'i Frantsa ny governemanta tarihin-dRajoelina [fr] tazorian'ny fanonganam-panjakana miaramila no nanakana ny famahana ny krizy.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 01 Septambra 2011